Home » Toerana fitsangatsanganana » Trinidad sy Tobago: Fanavaozana ny fizahan-tany ofisialin'ny COVID-19
Raha ny amin'ny 15th tsy nisy vaovao Covid-19 tranga voarakitra ao Trinidad sy Tobago tao anatin'ny 19 andro lasa. Notaterina izany na dia manohy manao izay azony atao aza ny Minisiteran'ny Fahasalamana mba hanalefahana ny fihanaky ny virus izay efa namoizana ain'olona valo. Ny totalin'ny tranga tsara dia mbola miisa 116.
Tamin'ny volana 11th nanomboka nanala fameperana ny governemanta nanomboka tamin'ny toeram-pivarotan-tsakafo misy ireo mpivarotra sakafo an-dalambe avela handeha hiasa irery ihany. Ho fanampin'izay, navela hisokatra mandritra ny ora maro ny fivarotana fitaovana. Na izany aza, ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana dia manohy manantitrantitra ny filàna ny fanaovana fanavahana ara-batana, ny fanaovana sarontava ary ny fanasana tanana matetika mba hisorohana ny fiverenan'ny tranga mety hitranga.
Ao anatin'ny fanalefahana dingana mijanona amin'ny filaminana an-trano dia antenaina fa hisokatra amin'ny 24 Mey ny sehatry ny famokarana sy ny fananganana sehatra ho an'ny daholobe izay maneho ny dingana faharoa amin'ny dingana enina amin'ny famerenana ny toe-karena. Nandritra ny fanombohan'ny dingana telo dia niadiana tamin'ny 7 Jonath ny mpiasam-panjakana rehetra dia tokony hiverina hiasa rehefa dinihina ny fandaharam-potoana sy ny fandaharam-potoana hafa. Hisy ny famerenana ny fandrosoana amin'ny elanelam-potoana manokana hamaritana raha azo atao ny manitsy ny dingana.
Nilaza ny Minisiteran'ny Fahasalamana fa santionany 2,576 no natolotra tany amin'ny CARPHA sy ny toerana misy ny UWI, St Augustine, raha 107 kosa ny olona sitrana. Ny marary iray ihany no mijanona ao amin'ny hopitaly hatramin'ny marainan'ny 15 Mey.
Sakafo maltese nofinofy izao, fety any aoriana
Willy Wonka nahazo fanandraman-jaza “Spa Candy” avy amin'ny Centara Hotels & Resorts